အကောင်းဆုံးတှေးတောဆငျခွ Apps ကပငါးခု - သတင်း Rule
အကောင်းဆုံးတှေးတောဆငျခွ Apps ကပငါးခု
သင့်ရဲ့သတိ Boost နှင့်ငြိမ်းချမ်းသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုအတှကျအခြိနျထွက်ထွင်းဤ app များနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ပြံ့လှငျ့အထက်မြင့်တက်လာရန်ကြိုးစား
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကောင်းဆုံးကိုဘာဝနာ apps များ၏ငါး” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 26 မေလအပေါ်များအတွက် 2016 09.56 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သတိ၏ပထမဦးဆုံးအုပ်ချုပ်သင့်ရဲ့ smartphone ကိုပိတ်ထားဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာအီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးနေ မှစ. အဆက်မပြတ်ဖို့, မိုဘိုင်းဂိမ်းကနေငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများ, သူတို့သည်ငါတို့နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုချဲ့ထွင်တူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းများမကြာခဏခံစားမိနိုင်ပါတယ်.
ဒစ်ဂျစ်တယ်စုပြုံပြွတ်သိပ်မှငွိမျးစနှေငျ့အဘို့သင့်စမတ်ဖုန်းရန်ဖွင့်ခြင်းဟာအရက်ဆိုင်ထဲမှာတစ်ဦးအရက်အမည်မသိအစည်းအဝေးကိုင်ဆောင်ကဲ့သို့ရယ်စရာခံစားရပေမည်, သင့်ရဲ့ inbox ကိုနှင့်အတူ, လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ပိုက်ခေါင်းပဲစုံတွဲတစ်တွဲကိုပယ် Candy Crush Saga.
ဆဲ, မိုဘိုင်းဘာဝနာ apps များကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. ရရှိနိုင်ရာနဲ့ချီရှိပါတယ်, အမှန်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့သူမြား၏ရေကူးကန်အများကြီးသေးငယ်ပေမဲ့. ဤတွင်စမ်းဖို့အကောင်းဆုံးငါးခုရှိပါတယ်.
Related: သငျသညျအနီးမျက်နှာပြင် ... အလာ 20 အကောင်းဆုံးအသစ်လူမှုရေး apps များ
ဤသည်ကိုဗြိတိသျှ app ကိုအမ်မာဝပ်ဆင်တစ်ဦးထံမှထောက်ခံချက်နှင့်အတူကြွလာ, သငျတို့သဘာဝနာနည်းနည်းပီ-dippy ကြောင်းစိုးရိမ်မှုတွေမသိုဆိုရင်အယူခံလိမ့်မည်ဟုတစ်ရိုးချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်. အဆိုပါပြောပြီ-စကားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းပတ်ပတ်လည်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ် 10 မိနစ်တစ်ရက်, ကနဦးဒေါင်းလုဒ်နှင့်အတူအခမဲ့ကြွလာမယ့် 10-session ကို pack ကိုနှင့်အတူစတင်. သငျသညျနောကျကိုဆက်လက်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်သင်£ 9.99 တစ်လသို့မဟုတ်£ 74,99 မှာတစ်နှစ်ကုန်ကျပါလိမ့်မယ်, ရိုးရှင်းနှင့်အတူ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာရင်းဇယားသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုခြေရာခံပြ.
အေးဆေးတည်ငြိမ်၎င်း၏ setup ကိုအတွက် Headspace ဆင်တူသည်: ဒီမှာ, အခမဲ့ဒြပ်စင်ပဲ့ထိန်း-တရားအားထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုနစျပါးရက်ကြာသင်တန်းဖြစ်ပါသည်, လစဉ်ကြေးပေးသွင်း£ 7,99 နှင့်နှစ်စဉ် option ကို£ 29,99 ကုန်ကျစဉ် - အဆုံးစွန်သောအရှင်တော်တော်ကောင်းသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျပေးဆောင်ပြီးတာနဲ့, ရရှိနိုင်သည့်အစည်းအဝေးများယေဘုယျသာယာဝပြောရေးများအတွက် 21 ရက်ကြာအစီအစဉ်ပါဝင်, နှင့်တစ်ပါတ်ကြာစီးရီးသင်ပိုကောင်းအိပ်ရကူညီပေးနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်. နှစ်ဦးအကြားနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောတစ်ဦးချင်းစီအစည်းအဝေးများလည်းရှိပါတယ် 20 မိနစ်, ဂီတနှင့်သဘာဝအသံများကို အသုံးပြု. နှင့် "unguided" အစည်းအဝေးများ.
Related: ဘဝက hack: သငျသညျမပါဘဲမဖြစ်သင့်ကြောင်း apps များ
ဒါဟာသင်လုံးဝရှေ့ပြေးများအတွက်ပေးဆောင်သောအနည်းငယ်ဘာဝနာ apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: ဒါကြောင့် iOS အတွက်£ 3.99 နှင့် Android များအတွက်£ 1.99 ကုန်ကျ, အဘယ်သူမျှမ In-app ကိုဝယ်ယူနှင့်အတူ. ၎င်း၏တရားအားထုတ်အစည်းအဝေးများသင်မှတက်နေသောအရာကိုအညီဆောင်ပုဒ်ကစီစဉ်နေကြပါတယ်: နှိုးထကနေ, တစ်ဦးအလုပ်ချိုးယူပြီးသို့မဟုတ်အလေးပေးခံစားချက်မှတဆင့်ပတ်ပတ်လည်စောင့်ဆိုင်းနေ, ခက်ခဲစိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှရရန်ရုန်းကန်နေရ. ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 80 လေ့လာစူးစမ်းဖို့အပုဒ်, ဒါကြောင့်သင်နှင့်ကိုက်ညီတဲ့တရားမျှတတဲ့အနည်းငယ်ရှာတွေ့သင့်တယ်.
စိတ်ကို App ကို
စိတ်ကို App ကို.
စိတ်ကို App ကိုအများဆုံးရနိုင်တဲ့ app များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နဲ့ပြောပေးခြင်းမရှိဘဲတရားအားထုတ်ပုဒ်တစ်လျောက်ပတ်သော catalog ရာပူဇော်သက္ကာ, သုံးကနေအထိ 30 အရှည်မိနစ်. Headspace နှင့်ဝသကဲ့သို့နှင့်တစ်ဦးမိတ်ဆက်သင်တက်ရဖို့ series နှင့်ပြေးရှိပါတယ်စိတ်အေးအေးထားပါ, download လုပ်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်းအခြားတရားအားထုတ်ခြင်း၏နံပါတ်နှင့်အတူ. သငျသညျအပိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်အရာအဘို့ပရီမီယံစာကြည့်တိုက်လည်းရှိတယ်: န့်အသတ်ဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအပုဒ်ဘို့£ 0,79 ဘို့£ 7,99 တစ်လ.
ပြုံးစိတ်ကဒီ roundup အတွက်အခြားအက်ပ်မှအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူလည်းကြိုဆိုနေကြသည်ကိုပင်သော်လည်း - ကမူလကကလေးများနှင့်လူငယ်လူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကွောငျးအတွက်. ၎င်း၏အစီအစဉ်များအသက်အရွယ်အားဖြင့်ခွဲခြားထားတယ်, မှာစတင် 7-11 နှစ်ပေါင်း: သင်သည်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသူကလေးများရှိပါက, ဒါကြောင့်သင်နှင့်သူတို့အသုံးပြုနေသည်အခြားသမျှနည်းလမ်းများနှင့်အတူအထောကျအကူဖွစျနိုငျ. ဒီ app ကရှင်းပါတယ်, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးလုံးဝအခမဲ့.
Omvana, ဝိပဿနာ Timer, ရပ်, အသက်ရှူး & ထင်, တစ်ဦးလူငယ်များသို့ကိုယူ နှင့် ဘုရားရေ! ငါတှေးတောနိုငျပါ ကြိုးစားနေရကျိုးနပ်စေခြင်းငှါအခြားကောင်းစွာမှတ်ယူဥပမာ.
သင်တို့သည်ဤသို့မဟုတ်အခြားဘာဝနာ app များကိုအသုံးပြုဖူး? သငျသညျအဘယျသို့ထင်ခဲ့ဘူးနှင့်သင်တို့အခြားစာဖတ်သူများကိုအဘယ်သို့အကြံပေးလို? ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်များအတွက်သင်တို့၏အကြံအစည်သိပါစေ.
40681	8 App များ, အပိုဒ်, အကောင်းဆုံး Android apps များ, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို, အင်္ဂါရပ်များ, ကျန်းမာခြင်း & သာယာဝပြောရေး, အသက်နှင့်စတိုင်, တှေးတောဆငျခွ, သတိသမ္, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
←7သငျသညျရှိသင့်သမိုဘိုင်းဓါတ်ပုံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ [VIDEO] က Man v စက်: ကွန်ပျူတာကွတ်နိုင်သလား, ရေးပြီးကြှနျုပျတို့ကိုသန်းသည် သာ. ကောင်း၏ Paint? →